Semalt Inotsanangura Zvikonzero Nei Instagram Inofanirwa Kuve Chikamu Chero Rokutengesa Kwose
create png online.5;text-align:justify;"> Mazuva ano, makambani ose anofanirwa kutarisa mikana inoshandiswa nevanhuiripo. Zvemagariro evanhu akawedzera huwandu hwemashoko uye zvigadzirwa zve digital. Semuenzaniso, pamwe ne-1,200 mamiro ega egayechipiri pa Instagram, vanhu vanoita mamiriyoni 180 anovandudza zuva rega rega paavhareji. Somugumisiro, kuvapo kwechigadzirwa pa Instagram kunekuva chaiko chaicho. Nokudaro, vashandi vebhizimisi vanofanira kutanga urongwa hwakajeka huchabatsira kambani kuti iite zvakanyanyahupenyu hwehuwandu hwemagariro evanhu mune imwe yenzvimbo dzakakosha zvikuru dzevanhu.
Alexander Peresunko, Mutengi weKuteresi Achibudirira Semalt Digital Services, anotsanangura zvikonzero nei Instagram iripo inokosha pamigetsi.
Kukosha kweMotokari yeMotokari
Zvizhinji zvemabhizinesi zvinotora zviuru zvemakore zvinenge pakati pe18-24 pakarepo pazvinomiriramari yegore negore yakabhadhara mu $ 50,000 kusvika $ 74,000. Kune vateereri, Instagram ndiyo inoshandiswa nzvimbo yevaraidzo. Semuyenzaniso,kuburikidza nedzimwe nhepfenyuro dzevhidhiyo boka iri rinopedza zvishoma - kubva pa $ 25,000 kusvika ku $ 49,000 gore negore.
mazana matsva mumutambo wepamusoro gumi mapuratifomu anoshandiswa pakutsvagazvigadzirwa. Vane 45.6% yevashandisi vanoratidza kuti vanowanzoyeuka zvinhu zvechigadzirwa kana vakazviona pa Instagram panekupfuura mumasikirwo emasikirwo.
Kutsvakurudza pamusoro pekutengesa kunoratidza kuti marikisi akanga achiwedzerakuvapo pa Instagram kwakawedzera nhamba yekutenga mumwedzi mitanhatu yekupedzisira..The Instagram platform inobatsira kusvika kune vateereri vemitambo,kusimudzira kuziva uye kuvaka kuvimbika.
Instagram inowedzera seyobudiriro yakabudirira sezvo inokurudzira zvinhu. Panevashandi vanopfuura mamiriyoni 300 munyika yose vanoshandisa maminitsi anenge 257 pamwedzi pachikuva. Instagram's success is caused byavo vanofunga nezvehutano hwevashandi, uye hutano hwekuona zviripo. Izvi zvikaita kuti zvipararire pasi rose. Instagram yakagadzirirwakumhanyira zvikamu makumi mashanu nemakumi mashanu zvakabhadhara zvikwata zvekushandira zvikwata gore rakapera uye rakachengetedza $ 1 biliyoni mari inowanikwa yegore rino. Iyo yemazuva ano misikainotora zviratidzo zvakakomba mune zvebhizimisi saka zvinofanirwa nemabhizimisi anotarisa kuti abudirire.
Vateereri vanokwezva kune zvakagadzirwa, uye kushayikwa kwacho kunotungamirira kunemugumisiro wekusava nemafungiro, kuwana ruremekedzo rukuru, kana marashi kusanzwisisika. Dzimwe nzira dzinobatsira kubudiriraKukunda zvinyorwa pa Instagram zvinotevera:
Ita Zvifananidzo Zvakanaka. Zvinyorwa zvakanakisisa uye zvepakutanga ndezvekuti,kunyanya vateveri iwe uchava
Ita Pfungwa Yakasiyana Yokuona (POV). Tora chero maonero ekuonakunyengera kune vashandisi mumushandirapamwe wekutsvaga marati
Ita Kuti Uzivikanwe. Nokushandisa bhidhiyo yemafungiro, chiratidzo chinotsvakazvinopikisana nehumwe mafungiro uye inzwi. Mapurisa emafungiro anotanga kutaridzika kwechiedza
Instagram uye Ramangwana
Chikonzero nei vanhu vachida mifananidzo ndeyekuti vanovhiringidza manzwiro uye manzwiro.Uropi hunoita huwandu hwemashoko muonekwe. Chinyorwa chinoumbwa nemifananidzo yakaisvonaka chinowedzera ivoKuona zvingaita ne 94 muzana sezvavanokwanisa kutaurira nyaya uye kuratidza mafungiro akakuvara. Vanhu vanoita zvakadzama kuwiriranauye zvavanoona pane pane zvavanoverenga. Nguva yemberi yekushamwaridzana iri muzviratidzwa uye icharamba ichibvisa mivirikuvimba nemagwaro akawanda ekutaurirana. Saka, makambani anofanirwa kutora nguva ino kuti agadzire marashi avo achishandiswa zvikurunetwork, Instagram.